The Ab Presents Nepal » बाढी पीडितको माग : मासु भात चाहियो !
बाढी पीडितको माग : मासु भात चाहियो !
इनरुवा -: बाढी र डुबानका कारण विस्थापित बनेकाहरुलाई सहयोगी संघसंस्थाहरुले राहत उपलब्ध गराई रहेका छन् । स्थानीय तहले समेत आफु पायकको सहयोग जारी राखेको छ । चिउरा, मुरी, चाउचाउ र भुजिया बढीमात्रामा पीडित समक्ष पुग्ने राहत सामग्रीमा पर्दछन् ।
सुनसरी प्रहरीका अनुसार जिल्लाको विभिन्न भेगमा बाढीबाट विस्थापित भई स्थानीय विद्यालयहरुमा शरण लिइरहेका परिवार संख्या ५ सय बढी छ । स्थानीय वडा सहित नगरपालिका, गाउँपालिका सहित संघसंस्थाले उनिहरुकालागि खानपिन लगायतको बन्दोवस्ती मिलाउँदै आएका छन्’ ।
बाढीका कारण डुबानमा परेका करिव ७५ मुसहरी परिवारलाई इनरुवा ३ को जनता आधारभुत विद्यालयमा राखिएको छ । पीडितहरुले राहतमा आफुहरुलाई मासु भात चाहिएको बताएपछि यतिवेला स्थानीयस्तरमा सो विषय चर्चामा छ’ ।
संघसंस्था सहितको सहयोगमा वडा कार्यालयले पीडितकालागि चिउरा, मुरी सहित दालभात खुवाउँदै आएको भएपनि पीडितका तर्फबाट मासु भातको माग गरिएको छ । मासु भात बेगरको खाना नखाने अडान राखी केहीबेर होहल्ला गरेका बाढी पीडितहरुलाई वडाध्यक्ष कालुराम गुरुङ लगायतका स्थानीय अगुवाहरुले सम्झाईबुझाई गरेका थिए ‘।
जसोतसो गरी ७५ परिवारका २ सय ५० बाढी पीडितलाई राहत सहित खानपिन जुटाउँदै आएको बताउने वडा कार्यालयले पीडितहरुबाट एक्कासी मासु भातको अडान आउनुलाई केहि व्यक्तिले उचालेको आशंका गरेको छ ‘।
वडाध्यक्ष कालुराम गुरुङले पीडितहरुलाई भड्काउने र उचाल्ने काम कोही कसैले गरेको भए त्यस्तो नगर्न ‘सम्वन्धित पक्षलाई आग्रह गरेका छन् । सक्नेले आफुखुशी रुपमा खानपिन लगायतको आवश्यक जोहो गरिदिन सुझाएका गुरुङले बाढी पीडितका हकमा आफु र वडाको तर्फबाट सकेको सहयोग जारी रहने बताए’ |